TOP amụọ izu na Amazon - June 2017 | Akụkọ akụrụngwa
TOP amụọ izu na Amazon - June 2017
Anyị bụ geeks, anyị hụrụ teknụzụ n'anya ma yabụ ndị elektrọnik na-ere ahịa. Ọ bụ ya mere anyị ji nọrọ na nche gbasara ụdị mmasị ọ bụla nke nwere ike ibilite kwa ụbọchị. Agbanyeghị, anyị enwegoro echiche ka mma, anyị ga-ewetara gị onyinye kwa izu nke ị na-ekwesịghị ịhapụ, n'ihi na ị ga - enweta ihe elektrọniks na akụrụngwa kachasị mma na ọnụahịa a na - apụghị imeri emeri.
Ka ọ were, nọnyere anyị ma chọpụta nke kachasị enye onyinye nke izu ikpeazụ nke June (site na June 26 ruo July 3) ma were ohere igbanwe igwe onyonyo, nweta ekwentị ọhụụ ...
A ga-emelite post a mgbe niile kwa ụbọchị, yabụ anyị na-atụ aro ka ị laghachi iji chọpụta ihe onyinye ọhụụ bụ maka ụbọchị a na-ekwu.
1 Amụma Amazon (June 26-July 3)
2 Ise euro nke Onyinye na Amazon na-azụ onyinye onyinye
Amụma Amazon (June 26-July 3)
Nweta onyinye bara uru na € 150 site na ịzụrụ ngwaahịa Canon gụnyere na nhọrọ a: njikọ
LG 49 anụ ọhịa TV (4K, IPS) maka € 766 na mbupu na otu ụbọchị
Motorla moto g4 gbakwunyereNanị mbipụta Amazon maka naanị € 179,99 (ọnụahịa ochie € 199,99, na-enye nkwado rue June 27).
Ọnụ ego nke JVC HA-EBTS ntị na ntị site na .29,90 38, mbelata nke 26% nke ego ọ na-emebu n'oge June XNUMX.
32 anụ ọhịa LG Gaming Monitor site na € 368,18, na mbelata nke 18% rue July 2
Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. maka naanị .21,99 45, ọnụahịa ọdịda nke 26% ruo XNUMX Juun
Ise euro nke Onyinye na Amazon na-azụ onyinye onyinye
Onyinye dị egwu Amazon laghachi bụ nke anyị ga-enweta € 5 dị ka onyinye mgbe anyị zụrụ opekata mpe € 25 na ego onyinye. Nwere ike ịga nweta kaadị onyinye gị na ihe ndị a njikọ. Cheta na onyinye a ga-adị ruo na June 30, yabụ na ị gaghị enwe ọtụtụ ụbọchị iji ya. Ọ bụ ihe dị egwu na otu n'ime ihe ndị ahịa Amazon na-atụkarị anya ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » TOP amụọ izu na Amazon - June 2017
Chei, na LG nke anụ ọhịa 49 ga-abụ nke m! M hụrụ n'anya otú mkpebi 4K si elekwu anya na ngalaba IPS
Zaghachi Araceli Guardia
lee ka ezigbo woooo si ju m anya
Flip ekwentị dị ndụ karịa mgbe ọ bụla
Egosiputa ihe mbu banyere Samsung Galaxy Note 8